Ụgbọ elu Alaska na-ebugharị ụgbọ elu San Francisco Giants-themed Airbus A321
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu Alaska na-ebugharị ụgbọ elu San Francisco Giants-themed Airbus A321
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • omenala • Entertainment • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Egwuregwu • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ụgbọ elu Alaska na -ekwupụta ịbanye na mbụ maka ndị ọbịa yi akwa San Francisco Giants site na egwuregwu egwuregwu oge egwuregwu.
Alaska ụgbọ elu bụ onye ọrụ ụgbọ elu nke ndị otu egwuregwu baseball San Francisco Giants.
Nke a bụ ụgbọ elu nke abụọ nke Alaska ụgbọ elu nke nwere ndụ raara nye San Francisco Giants.
Ụgbọ elu nke nwere ọdụ ọdụ N855VA ga -efegharị na netwọkụ ụgbọ elu Alaska ugbu a site na 2022.
Ụgbọ elu Alaska, onye ọrụ ụgbọ elu San Francisco Giants, na-eme ememme postseason ka ọ dị elu na mpụta mbụ nke ihe ọhụrụ Giants-themed livery. Ka oge na -aga maka egwuregwu ndị Giants na -abịa, a kpọbatara ụgbọ elu Airbus 321 taa na ndị na -apụ na San Francisco (SFO) maka Seattle (SEA).
“Ihe ole na ole na -atọ ụtọ dịka ịhụ nnukwu nnukwu agba a ka ọ na -efefe n'ọnọdụ anyị mara mma ka anyị na -abanye n'ọgba egwuregwu anyị. Olileanya m bụ na ụgbọ elu a na -enye ndị na -akwado Giants ụzọ inwe mmetụta nke ndị otu, oge ọ bụla ha mere njem, " Nnukwu San FranciscoOnye isi ala na onye isi ala Larry Baer. “Mmekọrịta dịka anyị nwere Alaska ụgbọ elus na -enye nkwado dị mkpa nke ndị obodo, ndị ntorobịa na mmemme agụmakwụkwọ dị ka Willie Mays Scholarship Fund na Giants Community Fund, nke n'aka nke ya na -enyere aka ịgbanwe ndụ ndị ntorobịa anyị. "
Nke a bụ ntinye nke abụọ raara nye San Francisco Giants. Ụgbọ elu ahụ, nke ọdụ ya bụ N855VA, ga-efegharị na netwọkụ Alaska ugbu a site na 2022. Ọhụrụ Giants-themed livery bụ otu n'ime ọtụtụ ụzọ ndị ọbịa nwere ike si eme mmemme ịgba bọọlụ otu ahụ. Alaska ụgbọ elu mara ọkwa naanị na ndị egwu na -eyi uwe ndị Giants nwere ike banye n'isi ụtụtụ maka ụgbọ elu San Francisco niile na -apụ maka oge egwuregwu egwuregwu otu egwuregwu.
Ndị ọrụ Alaska raara ụgbọ elu ahụ yana ego $ 100,000 na Willie Mays Scholarship Fund, iji sọpụrụ 'Say Hey Kid's' 90th ụbọchị ọmụmụ. Ego a na -enyere aka ime ka ebumnuche kọleji mezuo maka ndị ntorobịa San Francisco ma nye ha ike ịchụso ebumnuche ha iji nweta ihe ịga nke ọma n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị, kọleji na karịa. Ejikwa akwụkwọ mpịakọta nke ọdụ ụgbọ elu 2 na mmemme iju anya nke juputara na ntụrụndụ DJ na saịtị, onyinye, onyinye na nleta sitere na mascot Giants “Lou Seal” na-esonye n'ememe ahụ.
"Alaska abụwo onye mmekọ dị mpako nke ndị Refeyim kemgbe afọ 2017," Natalie Bowman, onye isi njikwa ụgbọ elu Alaska nke ika na nkwukọrịta ahịa. "Obi dị anyị ụtọ igosipụta mpako ndị dike anyị site na ụkwụ 35,000 site na ụgbọ elu a na -ele anya pụrụ iche, anyị na -achọkwa ndị otu ahụ ọchichị kachasị mma ka ha na -atụ anya na ha ga -agbasi mbọ ike na postseason."
Ụgbọ elu agbakwunyere nke ndị Giants kpaliri na ịbanye na mbido so n'ọtụtụ ụzọ Alaska na-amụba ọnụnọ ya na Bay, nke atọ kacha ibu.